कांग्रेसमा राजीनामाको सिलसिला सुरु, पार्टी अध्यक्षले आज राजिनामा प्रस्तुत गर्न सक्ने - EKalopati
New Delhi: Congress President Rahul Gandhi addressesapress conference, at AICC HQ, in New Delhi, Monday, March 25, 2019. Party Spokesperson Randeep Surjewala and party leader KC Venugopal are also seen. (PTI Photo/Kamal Singh)(PTI3_25_2019_000050B)
एजेन्सी– लोकसभा चुनावमा लज्जास्पद हारपछि भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसमा राजीनामाको सिलसिला सुरु भएको छ । उत्तर प्रदेश, ओडिशा र कर्नाटकका तीन शिर्ष कांग्रेस नेताले पार्टी अध्यक्ष राहुल गान्धीलाई आफ्नो राजिनामा पठाएका छन् ।
उत्तर प्रदेशको कुल ८० सिटमा कांग्रेसले केवल रायबरेलीमा मात्र जित हासिल गर्न सक्यो । राहुल गान्धीले समेत अमेठीको सिट बचाउन सकेनन् ।
हारपछि उत्तर प्रदेशका पार्टी अध्यक्ष राज बब्बरले आफ्नो पदबाट राजिनामा दिएका छन् । राज बब्बर आफै पनि फतेपुर सिकरीबाट चुनावी मैदानमा थिए तर उनले भाजपाका प्रत्याशीसँग लगभग पाँच लाख मतले हार भोगे । बब्बरले ट्वीट गर्दै प्रदेशको हारको जिम्मेवारी लिदैं राजीनामा दिइरहेका छन् ।
कर्नाटक राज्यको चुनावी अभियानमा कांग्रेसको नेतृत्व गरेका एचके पाटिलले पनि राजिनामा सुम्पिएका छन् । २८ सिट भएको कर्नाटकमा काग्रेसले जम्मा एक स्थानमा जित हासिल गरेको छ । जबकी दक्षिणका अन्य प्रदेशमा राज्यले निक्कै राम्रो प्रदर्शन गरेको छ ।
यस्तै ओडिशा प्रदेशका कांग्रेस प्रमुख निरन्जन पटनायकले पनि राजिनामा दिएका छन् । ओडिशामा कांग्रेसले जम्मा नौं विधानसभा सिट र एक लोकसभा सिटमा जित प्राप्त गरेको छ । पटनायक आफै दुई विधान सभा सिटमा लडेकोमा दुवैबाट हारे ।
कांग्रेसमा थप राजिनामा आउन सक्ने विश्वास गरिएको छ । आज शनिवार भारतीय कांग्रेस पार्टीका वर्किंग कमिटि(कार्यसमिति) वैठक बस्दैछ । पार्टीको महत्वपूर्ण निर्णय लिने जिम्मेबारी पाएको यस निकायले चुनावी नतिजाको समीक्ष गर्दैछ ।
Previous articleरेल विभाग कमिसनको चक्करमा चुर्लुम्म
Next articleबजेट सक्न मन्त्रालयले धमाधम टेण्डर आव्हान गर्दै